Qalabkan sawirka ah ee 56 $ waa isafgarad in aad xitaa illoobi doonto xataa - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Qalabkan dashboardka ah ee 56 $ waa isafgarad aad u xitaa xitaa halkaas - BGR
Qalabkan dashboardka ah ee 56 $ waa isafgarad aad u xitaa xitaa halkaas - BGR
Halkaa marka ay marayso, aad noqon lahaa waali ku filan in la wado oo aan camera a Jaha gaariga. qalab A fudud ka dhigi kartaa faraqa u dhexeeya caddeyso aan eed lahayn ee daafaca iyo bixin kun oo lacagta caymiska dheeraad ah haddii darawalka fal-dambiyeedka uu go'aansado inuu la jiifsado oo ku saabsan waxa dhacay. Dadka qaar ayaa sheegaya in ay leeyihiin ma camera dashboard maxaa yeelay waxa ay qaadataa meel badan Muraayadda hore, lakiin waxaan heysanaa heshiis gacankudhiigle maanta ka tagi doono dadkaas oo aan raaligelin. camera dashboard The AKASO V1 baabuurta waa mid aad u habboon oo aad illowdid in ay tahay xitaa halkaa iyo in ay ku jirto iibka qiimaha ugu hooseeya. Coupon Goo 15% bogga Amazon iyo isticmaali code coupon ee D5A983JM magalka, iyo kaliya in aad bixiso $ 55,99 for dashboard fiican 80 $!
Halkan waxaa ku qoran dhammaan macluumaadka muhiimka ah ee bogga wax soo saarka:
Wifi WITH APP: WiFi dashboard The AKASO V1 waa isku dhafan, aad ku xidhan karto muraayada gaadhiga si aad telefoon la isticmaalayo app ah, View live, rights reserved, geliyaan oo ay wadaagaan videos on dhan dhufto ee bulshada aad la asxaabta iyo qoyska, iyo isku dayda waqtiga telefoonka marka la isku xirayo, ma jirto baahi loo qabo in gacanta lagu qabto.
TRACK GPS: Iyadoo GPS, muraayada camera baabuurta ee si sax ah u qoraan karaan jidadka wadista safarka kasta, sida xogta xawaaraha, dhigaha iyo loolka, iyo goobta. Waxaad si fudud u arki kartaa wadada oo raac on Google Map via APP Phone ama ciyaaryahan AKASO, safarka kasta more macno leh oo dheeraad ah oo aamin ah.
ARAGTIDA Super HABEENKII: in ay Sony SENSOR mahad, safka hore ee technology, taas oo qabtay a HD 1296P Full, ka badan 1080p, shaki la'aan hagaajinaysaa ay qaab imaging, haddii ay habeen iyo maalin toona. Noocyada firfircoon ee ballaadhan (WDR) ayaa u oggolaanaya kamarad dashboardka baabuurta inay si toos ah u dheelitirto goobaha iftiinka iyo madow ee fiidiyowga.
Kormeeraha G-SENSOR iyo ogaanshaha DHIGASHADA: duubo loop waa caadiga ah iyo la dhisay-in G shidma sidhab ah clips lagu qoro. si loo hubiyo sharafta xogta marka isku dhac ah la ogaado. hab la dhigto ayaa ilaalineysa gaariga xataa parking - waxay u saamaxdaa camera safi saarnaa iftiinka haddii saameyn la ogaado, badbaadin for 30 ilbidhiqsi ka dibna mar kale dami.
MUUJINTA KALE: dashcam The AKASO V1 yimaado kaarka microSD saacadood Go 16 3 hoos isticmaalka caadiga ah, ilaa ay taageertaa in 128 10 ama GB fasalka sare ah .. Xagasha aragtida 170 ° si loo qabsado waddooyinka 5. naqshadeeda gaarka ah iyo qarsoodi ah ayaa kaa hortaagan inaad aragto ama xitaa illoobo jiritaanka baabuur, markhaati aad u qarsoon oo wadada ka qarsoon.
Raac @BGRDeals on Twitter ugu dambeyntii iyo ugu dambeeyay dalabyada. shabakada.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan dalabyada la kafaalo-qaaday iyo fursadaha fursadaha boostada, fadlan u soo dir email sponsorisé@bgr.com
Waxyaabaha ku jira BGR Deals waxay ka madaxbannaan yihiin Tifaftirka iyo Xayeysiiska, BGR waxay heli kartaa guddi iibsasho ah oo lagu sameeyo boosteejooyinkeena.
Qalabka Apple Watch ee 3 waligeed laguma iibin Amazon - BGR
Iibinta Amazon wuxuu ku siinayaa 70 $ drone for 42 $ - BGR